करण जौहरको च्याट शो मा जानु महंगो भयो यी क्रिकेटरलाई, टीमबाट निलम्बित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
करण जौहरको च्याट शो मा जानु महंगो भयो यी क्रिकेटरलाई, टीमबाट निलम्बित
एजेन्सी । भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)ले टीमका ओपनर लोकश राहुल र अलराउण्डर हार्दिक पंड्यालाई निलम्बन गरेको छ । उनीहरु दुबै जना हाल अष्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका थिए । उनीहरुलाई त्यहाँबाट फिर्ता बोलाइएको छ ।
दुबैजना क्रिकेटर एक टेलिभिजन शो कफी वीद करणमा सहभागी भएका थिए । सो कार्यक्रममा पंड्याले व्यक्त गरेको विचारका कारण उनीहरु संकटमा परेका हुन् । यद्यपी यो घटनामा राहुलको गल्ति भनेको सो कार्यक्रममा सहभागी हुनुमात्र हो ।
शो मा हार्दिकले एक प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा महिलाको भावनामा ठेस पुग्ने किसिमको विवादित बयान दिएका थिए । उनले कैयौं महिलासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको बताएका थिए ।
यसपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो । कप्तान विराट कोहलीले पनि यस्तो विचारको आलोचना गरेका थिए । यसैबीच स्टार नेटवर्कले कफी वीद करणको विवादित शोलाई हटाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित प्रशासकहरुको समिति (सीओए)का प्रमुख विनोद रायले दुईजना क्रिकेटरलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए । उनले यो विषयमा जाँच पूरा हुनेबेलासम्म उनीहरुमाथि निलम्बन जारी रहने बताए ।
यो विवादपछि हार्दिकले ट्वीट गरेर माफी पनि मागेका थिए । उनले शो को नेचरअनुसार आफू त्यसमा लिन भएर जवाफ दिएको बताएका थिए । उनले आफ्नो भनाईले कसैमाथि भावनामा ठेस पुगेकोमा माफीसमेत मागेका थिए । उनले आफुले कसैको भावनामाथि ठेस पुर्याउन त्यस्तो नभनेको बताएका थिए ।